यदि ग्रहहरूको शुभ अवस्थाहरू यस हप्ता रहन गयो भने त्यसले राशिफलमा पनि प्रभाव पार्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईको दिन चम्किनेछ । यद्यपि केही राशि चिन्हहरू ग्रह नक्षत्रको परिवर्तनबाट पनि प्रभावित हुनेछन्। त्यसोभए हामीलाई सद्गुरु स्वामी आनन्दजीबाट प्राप्त ज्ञानका आधारमा लेख्दैछौ यी राशिका व्यक्तिको जीवनमा यस हप्ता के परिवर्तन हुँदैछ ? आफुले पढिसकेपछि अरुको सहयोगका लागि सेयर गर्न नभुल्नुहोला ।
मेष चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) अनुभवले लाभ उठाउनेछ
यो हप्ता फरक तरिकाले रमाइलोका साथ वित्नेछ। साहस र मूल विचारहरूको संयोजनले सकारात्मक परिणाम दिनेछ। घरपरिवारका सदस्य वा मान्यजनहरुको अनुभव र सहयोगको साथ मिल्नेछ । महिनाको बसाई पछि, टाढाका ठाउँहरूमा यात्रा गर्ने इच्छा प्रबल हुनेछ। निकट भविष्यमा, व्यापार र मंगल भ्रमणको योग गठन भइरहेको छ। कामको व्यस्तता बढ्छ र शारीरिक र मानसिक श्रमले तपाईंलाई तनाव बढाउन सक्छ। आय बढ्नेछ र कमाईको नयाँ स्रोत थपिनेछ । खर्च बढ्छ तर आय भन्दा बढि हुँदैन। समारोहमा जानको लागि तयारीमा पैसा खर्च हुनेछ। छोटो अवधिको लगानीमा पैसा कमाइनेछ। यस हप्ता भविष्यको व्यापारमा लाभका संकेतहरू छन्। यो तपाइँका प्रियजनहरूका अनजान कार्यहरूसँग अलमलमा पर्ने समय देखिन्छ । जीवनसाथीबाट बेमेलको अवस्था झेल्नुपर्ला । शरीरमा पीडा हुनेछ।
तपाईको राम्रो रंग गुलाबी
शुभ नम्बर १ र ९
बृष इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) परिवारमा खुशी रहनेछ । यस उत्सवको मौसमले तपाईंको जीवनमा खुशीको अवसर ल्याउँदछ। थोरै प्रयासको साथ ठूलो परिणाम प्राप्त हुनेछ । समाजमा तपाईंको प्रतिष्ठा बढ्नेछ। केहि समय पति र पत्नी संग कुनै बहस वा झमेला हुन सक्छ। आय बढ्नेछ। परिवारमा खुशी हुनेछ। कुनै पनि लाभ सम्झौता वा सम्झौता खुशीको एक कारण हुनेछ। एक परिवार मिलन सम्भव छ। विपक्षीहरूले तपाईंलाई सताउन सक्नेछन् । तर तपाईंले कुनै क्षति भोग्नुपर्ने छैन । आमाको पूर्ण समर्थन अपेक्षा गरिएको छ। जीवनसाथीप्रति लचिलो दृष्टिकोणले शान्ति प्रदान गर्दछ। गलत मनासयको संसारले प्रभाव जमाउन सक्छ । त्यसैले आफ्नो आवाज नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। सहकर्मीहरुको सहयोग कम हुनेछ। योजनाहरु सफल हुन्छन्। तपाईं राम्रो समाचार प्राप्तको प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ । शत्रु र शुभचिन्तकहरू तपाईंको सफलतासँग दुखी हुनेछन्।
राम्रो रंग केसर
शुभ नम्बर १
मिथुन का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) ज्वरो र पेट दुखाइलाग्दो हुन सक्छ । मिथुन राशिको लागि सूर्य उदाउनेछ। प्रकाशको यस उत्सवले जीवनमा ज्योतिको नयाँ मूल्यहरू सिर्जना गर्दछ। राशि स्वामी बुध, बुध राशिको जातकमा आफ्नो साथी शुक्रको साथ साथीहरू सूर्य र शत्रु मंगलमा व्यस्त छन्। खुशी बृद्धि हुनेछ तर बोलीको प्रभाव आश्चर्यजनक हुनेछ। ग्रह योग तपाईंको र तपाईंको जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा केही समस्या आउनसक्छ । ज्वरो र पेट दुख्ने सम्भव छ। मानसिक व्यस्तता बढ्नेछ। यात्रा दुबै खुशी र थकान ल्याउँछ। उच्च अधिकारीहरूको चंगुलमा नपर्नुहोस्, अन्यथा तिनीहरूका झमेला तपाईमा पर्नेछन् । कुरा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। सहकर्मी वा शुभचिन्तकको गलत धारणाको कारण मानसिक तनाव बढ्नेछ। परीक्षा र प्रतिस्पर्धा तयारी गति बढ्नेछ। तपाईंले यस हप्ताको कुनै उपलब्धी आफ्नै कौशलबाट लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। उच्च शिक्षामा चासो जगाउने छ। एकाग्रता प्रभावित हुनेछ।
राम्रो रंग ( रातो, हरियो
शुभ नम्बरहरू१ र ५
कर्कट हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) यस हप्ताले तपाईलाई जटिल रोगको भागिदार बनाउन सक्छ । राशि चक्र स्वामी चन्द्रमाले मार्स राशि वृश्चिकमा शत्रु केतुको साथ नयाँ रंग भर्नेछ र चंद्रमा खुशी पार्नेछ। क्यारियरमा केही सानो संघर्ष र भ्रम धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ । कडा परिश्रमको थोरै फाइदा हुनेछ। साना स्वास्थ्य समस्याहरूले बेचैनी निम्त्याउँछ। आत्तिनुबाट जोगिनुहोस् अन्यथा मानसिक शान्ति खलल हुनेछ। पारिवारिक स्वास्थ्य प्रभावित हुनेछ। तपाईंको वाहनले अरूलाई समस्या निम्त्याइरहेको छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्। कानूनी मामिलामा खर्च हुनेछ। यो समय नयाँ व्यवसायको लागि खराब हुनेछ। जागिर वा पेसाको अनावश्यक हेरफेरले हानी गर्दछ। विपरित अवस्थाले दिमाग विचलित हुनेछ। विरोधीहरूले सताउने प्रयास गर्नेछन् तर अन्तमा तिनीहरू आफैं पराजित हुनेछन्।
राम्रो रंग ( केसर
शुभ नम्बर २
सिंह मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) अचानक यात्राको सम्भावना छ । राशि स्वामी शुक्र जातिको बुध ग्रहको साथ शुक्र ग्रहको राशिमा बस्नेछन्। तपाईले यसबाट फाइदा लिनुहुनेछ। पारिवारिक आनन्द बढ्नेछ। आर्थिक लाभहरूको योग भेट्टाइनेछ। शारीरिक पीडा हुने योग भइरहेको छ। यो मात्र होईन, गलत मार्गबाट ​​कमाउने प्रयासले तपाईंलाई समस्यामा पार्छ। तपाईंको गलत निर्णयमा क्षति हुने सम्भाव्यता छ। उच्च शिक्षा मा अवरोध, दिमाग चोट हुनेछ। मानसिक अस्थिरता हुनेछ। महत्वाकांक्षा पूरा गर्न बाधा हुन सक्छ। प्रेम सम्बन्धहरू उल्टो हुनेछ। यो नयाँ व्यवसायको लागि उत्तम समय होइन। अतिशयोक्तिले भ्रम बढाउनेछ। त्यहाँ अचानक यात्रा को सम्भावना छ। विरोधीहरू चञ्चल हुनेछन्। अरू कसैसँग सम्बन्धित कुनै अप्रिय समाचार फेला पार्न सकिन्छ। मानिसहरु तपाईको क्षेत्र मा विरोध हुनेछन् । व्यापारीहरूले नयाँ अवसरहरू पाउने देखिन्छ ।
राम्रो रंग मरून
शुभ नम्बर ९
कन्या टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) आनन्दको अनौंठो उपहार फेला पर्नेछ । यस वर्षको दिपावली सुस्त मुस्कुराइरहेको भएपनि तपाईको खुशीको अनौंठो उपहार ल्याउँदैछ। यस राशिका स्वामीले आफ्नो मित्र सूर्यसँग बुध शुक्रका राशिफलमा ट्वीट गर्दै र आफ्नो क्यारियरमा नयाँ आशा जगाइरहेका छन्। सांसारिक आनन्द बढ्नेछ। समाजमा सम्मान बढ्नेछ। कल्पना प्रवाह हुनेछ। तपाईले नयाँ काममा सफलता पाउनुहुनेछ। रोमान्सको समय भने राम्रो छैन। त्यसैले सावधान रहनुहोस्। तपाईको सृष्टिको सराहना गरिन्छ। पारिवारिक आनन्द बढ्नेछ। साथीहरू र शुभचिंतकहरू धेरै सहयोगी साबित हुँदैनन्। महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध थप बलियो हुनेछ । गलत निर्णयले तनाव ल्याउनेछ। कसैको प्रशंसा गर्दा दिमागमा आनन्द आउनेछ। जागिर र पेसामा भने सतर्क हुनुहोस्। अवरोधको साथ तपाईंको लड्न सक्ने क्षमता बढ्नेछ। अनावश्यक जिज्ञासाले झगडा उत्पन्न गराउँछ। सोचबिचारै बोल्नुहोस्। तपाईका अभिभावकको स्वास्थ्यको बारेमा तपाईलाई यो हप्ता चिन्ता हुनेछ।
राम्रो रंग ( हल्का हरियो
शुभ नम्बर ५
तुला र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) मित्र र सहकर्मीहरूसँग मिलेर बस्नुपर्नेछ । यस राशी ग्रहका स्वामी, श्रीगु, भृगु (ऋषिका पुत्र) कन्याको ध्यान गरिरहेछन् र इमान्दारीपूर्वक मुस्कुराउँदैछन्। यो शुक्र बुद्धिले शक्ति बढाउँछ। मानसिक दक्षता र क्षमता वृद्धि हुनेछ। थोरै परिश्रमसहित सफलता प्राप्त हुन्छ। परिवार रमाईलो बन्नेछ । मित्र र सहकर्मीहरूसँग सद्भाव रहनेछ। खर्च बढ्नेछ तर आय पर्याप्त हुनेछ। त्यहाँ केही भिन्नताहरू हुन सक्छन्। मानसिक भ्रम बढ्नेछ। कम्मर र खुट्टा मा दुखाई हुनेछ। ग्रह योगले आलोचनामा अग्रसर गर्दछ। वैवाहिक आनन्द बढ्नेछ। तपाईंको आफ्नै कुनै अनावश्यक टिप्पणीहरू विचलित हुनेछ। शक्तिसँग नजिकका मानिसहरूलाई भेट्ने फाइदाहरूको योगफल। बिहीबारबाट गडबडी हटाउँदा मानसिक शान्ति हुन्छ। कानून बेवास्ता गर्दा समस्या हुनेछ। व्यवसाय मध्यम देखि राम्रो सम्म हुनेछ। नयाँ काम प्राप्त हुनेछ ।
शुभ नम्बर ५ र ६
बृश्चिक तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) बिरामी पर्ने देखिन्छ । तपाईंको जीवनमा यस हप्ता आनन्द र उदासी दुवैको प्रशस्त सम्भावना छ । विपक्षीहरूको संख्या बढ्नेछ। रोगी हुँदा फाइदा हुन्छ। म बिरामी भए भनेर घरमा नै बस्नुभयो भने ठूलो क्षति रोकिनेछ । चिन्ताको कारण नोक्सान हुनेछ। आफन्तहरूको सम्मना गर्नबाट जोगिनुहोस्। नगरेको खण्डमा आलोचित हुनुपर्ला । आफन्तको सम्मान गरे लाभ उठाउनेछ। शरीरको पछाडि पीडा हुन सक्छ। स्वास्थ्य मिश्रित हुनेछ। हतार नगर्नुहोस्। समस्या नातेदारहरूको कारण हुन सक्छ। छोटो अवधिको लगानी नगर्नुहोस्। साथीहरूले काम गर्दैनन्। सहकर्मीहरूबाट निराश हुनेछ। व्यापार यात्रा थकानको कारण हुनेछ। बुधवार पछि, आकस्मिक पैसाको योग प्राप्त हुन्छ। सम्पत्तिले फाइदा पुर्‍याउँछ। सरकारी व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दा सावधान रहनुहोस्। त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ।
राम्रो रंग पहेंलो
राम्रो अंक ३ र ९
धनु ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) आकस्मिक आर्थिक लाभहरूको योग छ । यो हप्ता फरक तरिकाले जीवन हासि हासि बित्नेछ । यस राशिका जातकका स्वामी ऋषि अंगिरा, र आमा सुरुपाको छोरा जुपिटर यस समयमा आफ्नै राशिमा हुनेछन्। गोल्डेन फुट को दोस्रो गुरु दाहिने हुँदा अचानक आर्थिक लाभ दिनुहुन्छ। तर आंशिक थकान हुनेछ। शासन र शक्तिसँग सतर्क रहनुहोस्। विवाहित जीवनमा बेचैनी सम्भव छ। खुट्टा र पछाडि दुख्ने सम्भावना छ। खराबीलाई वेवास्ता गर्नुहोस्। बढ्दो खर्चले तनाव थप्छ । तर आय बढ्नेछ। लोकप्रियतामा वृद्धि हुनेछ। विरोधीहरू पराजित हुनेछन्। कसैको इच्छाबाट फाइदा लिन सम्भव छ। शुक्रबार तनाव हुनेछ। जीवन साथीसँग प्रेम बढ्छ। सिक्ने क्रममा अनिश्चितता हुनेछ। तपाईको दिमाग अध्ययनबाट उत्साहित हुनेछ। नयाँ योजना व्यवसाय मा सफल हुनेछ। कुनै पनि सरकारी निर्णयले व्यवसायलाई असर गर्ने छ।
राम्रो रंग ( पहेंलो
शुभ नम्बर ३
मकर भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) शारीरिक विकारहरूले चिन्तित हुनुपर्ने हु्न्छ । मकर राशिका लागि यस हप्ता जीवनमा संघर्ष र रमाईलोको मिश्रण छ । यस हप्ता, सूर्यका स्वामी सूर्यपुत्र शनि आफ्नै राशिको मकरमा छन्। सुनौलो खुट्टाको पहिलो शनिले शारीरिक व्याकुलता दिनेछ र हाम्रो अनुभवहरूको भण्डारमा जीवन प्रदान गर्दछ। केही राम्रो समाचार सुन्दा खुसी लाग्नेछ। अधूरा काम पाउँदा खुशी हुन्छ। जागिर र पेसा व्यबसायबाट प्रोत्साहनजनक समाचारहरु आउनेछन्। तपाईले नयाँ उद्यम वा व्यवसायमा प्रवेश गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ। आय मध्यम र राम्रो हुनेछ। पारिवारिक वातावरण मिश्रित हुनेछ। आमाको भनाइले केही समस्यामा पार्न सक्छ ? नयाँ कदम आत्मविश्वासका साथ निर्धारण गरिनेछ। बच्चामा आर्थिक खर्च हुनसक्छ । कानूनीले भोग्नुपर्दा सजाय दिक्क लाग्न सक्छ। भावनाहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्।
राम्रो रंग ( खैरो
शुभ नम्बर ४
कुम्भ गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) हप्ताको सुरुवात रमाइलो हुनेछ । तपाईंको प्रभाव क्षेत्र मा वृद्धि हुनेछ। तपाईंमा सूर्यको प्रभावका कारण तनावपछि काम उपलब्धि को आनन्द प्राप्त गर्नेछ। कुनै पनि शुभ समाचारले दिमागलाई खुशी पार्नेछ। विरोधीहरूले पनि तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन्, तर कोहीले तपाईलाई सताउन सक्छन् । शेयर बजारबाट टाढा राख्नुहोस् अन्यथा घाटाको योग छ । धातु व्यापार मा नाफाको योग हो अनौठो परिस्थितिबाट आर्थिक लाभको सम्भावना छ। बच्चाहरूको प्राप्तिले आनन्द ल्याउँदछ। आमा पीडित हुन सक्छन् । पुराना विरोधीहरू शान्त रहनेछन्, तर केहि नयाँ कठिनाइहरू पनि आउन सक्छन्। बहिनीबाट केहि विवाद हुन सक्छ। तर प्रेम–स्नेह पनि बढ्नेछ। बुद्धिमत्ता र युक्ति बढ्नेछ। साझेदार तनाव हुनेछ। जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा केहि उतार चढावहरू हुनेछन्।
राम्रो रंग ( हरियो
मीन दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) आय बृद्धिको योग छ । तपाईंले शुभ र उत्तम अभ्यासहरूसँग जोडिन पाउने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। खुशी बढ्नेछ। आय बढ्नेछ। सरकारी अधिकारीहरुसँग सम्बन्ध बनाइनेछ। यस हप्ता केही हिचकीहरू हुनेछन्। तर तपाईं आफ्नो कार्यनीति तिनीहरूलाई सामना गर्नुपर्नेछ। पारिवारिक आनन्द पाइन्छ। बहस गर्नबाट जोगिनुहोस् अन्यथा समस्या उब्जिन्छ । त्यहाँ केहि फरक गर्ने इच्छा हुन सक्छ। ऋण दिएको पैसा पनि यस हप्ता फिर्ताको लागि योग छैन। व्यापारमा मध्यम सफलता हुनेछ। पुरानो व्यापार सम्बन्ध पुनर्स्थापित हुनेछ। व्यापार भ्रमणको सम्भावना छ। नयाँ योजनाहरूमा काम गर्ने अवसर हुनेछ। नयाँ व्यवसाय चम्किन्छ। बहुमूल्य चीजहरूको व्यापारीहरूले लाभ उठाउनेछन्। खानामा सावधानी अपनाउनुहोस्। यदि तपाईं सवारी लिने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसबेला कसैको राय लिनुहोस्।
राम्रो रंग ( गोल्डन, रातो
शुभ नम्बर ३ र ९